I-Snapdragon 865 iza kuza nenkxaso ye-LPDDR5 RAM | I-Androidsis
El Qualcomm Snapdragon 855 Yi-chipset yeflegi yenkampani eyenza amandla uninzi lwee-smartphones eziphezulu ezikhutshwe kulo nyaka, kwaye umntu oza kungena ezihlangwini zakhe uya kulandela kwikamva elingekude kakhulu.
Inkampani iqale ukusebenza kwisizukulwane sayo esilandelayo, i-chipset ephathekayo, ekulindeleke ukuba ibizwe Snapdragon 865. I-SD855 yayinenombolo yemodeli yangaphakathi 'SM8150' kwaye yabizwa ngegama elithi 'Hana'. Ngokweengxelo, le inenombolo yemodeli "SM8250".
I-codename ye-chipset elandelayo yeflegi kuthiwa yiyo «Iprojekthi Kona». "Kona" ligama elibhekisa kwiziqithi zeHawaii. Into enomdla kukuba, iQualcomm ibambe iNgqungquthela yeTekhnoloji yeQualcomm eHawaii ukwazisa abaprosesa bayo abaphezulu ngoDisemba.
Ngelixa kuninzi okungaziwayo malunga neprosesa ye-Snapdragon 865, kuyatshiwo oko i-chipset iza kuza nenkxaso ye-LPDDR5 RAM. I-Qualcomm sele ineesampulu ze-SM8250 entsha ngaphakathi kwaye iyazivavanya kunye ne-LPDDR5 RAM, ishiya kuye ukuba ngubani umthengisi.
Nangona kunjalo, kuya kuthatha ixesha elide ngaphambi kokuba sibone nantoni na enxulumene kakhulu ne-Qualcomm ezayo yeflegi ye-Snapdragon 865 chipset. Ke ngoko, sinethemba lokwazi ngakumbi ngale SoC kwiinyanga ezizayo.
Okwangoku, I-TSMC ibhengeze inkqubo yayo entsha ye-5nm, ebeka isiseko se-chipset ye-Apple A14, iprosesa eya kuthi isebenzise ii-Apple iPhones ngo-2020. Sikwalindele ne-chipset yeQualcomm eyenziwe kusetyenziswa inkqubo ye-5nm, njengoko kusaziwa kakuhle ukuba ukhuphiswano phakathi kwabavelisi bobabini lunzima, kwaye thina Andinakulindela okungaphantsi kwesi siqendu. Nangona kunjalo, okwangoku, yonke into ihleli ibanjiwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Snapdragon 865 iza kuza nenkxaso ye-LPDDR5 RAM